Smashwords – Fomba Ahafahanao Manaporofo Feno Ny Asa Fanompoanao – a book by Dag Heward-Mills
Fomba Ahafahanao Manaporofo Feno Ny Asa Fanompoanao
Tsy misy amintsika ny mikasa ny ho tonga any an-danitra raha tsy nahavita izay tian' Andriamanitra ho ataontsika eto an-tany. Tsy misy, na iray aza! Te hamita ireo asa izay nampanaovin'Andriamanitra antsika isika. Ity boky ity dia mikasika ny fomba hamitanao ny asa fanompoanao. Ity boky ity dia fitarihana amin' ny fomba ahafahantsika mamaly ireo zava-mitranga avy amin' Andriamanitra eo amin' ny fi More
Tsy misy amintsika ny mikasa ny ho tonga any an-danitra raha tsy nahavita izay tian' Andriamanitra ho ataontsika eto an-tany. Tsy misy, na iray aza! Te hamita ireo asa izay nampanaovin'Andriamanitra antsika isika. Ity boky ity dia mikasika ny fomba hamitanao ny asa fanompoanao. Ity boky ity dia fitarihana amin' ny fomba ahafahantsika mamaly ireo zava-mitranga avy amin' Andriamanitra eo amin' ny fiainantsika - mba tsy hangaina amin' izany andro izany. Hahatanteraka ny asa fanompoanao anie ianao ary Andriamanitra anie hiteny aminao hoe, "Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky!"